Hanao sakana ao Brickaville ny mpomba azy… : Nidoboka am-ponja fanindroany i Roméo | NewsMada
Hanao sakana ao Brickaville ny mpomba azy… : Nidoboka am-ponja fanindroany i Roméo
Tohin’ilay raharaha fitoraham-bato, eny amin’ny RN 2, naiditra am-ponja vonjimaika fanindroany, ao Ambalatavoahangy, omaly, indray i Roméo. Vokatr’izany, nilaza hanao sakana ao Brickaville ireo mpomba azy sy ny fianakaviany.
Naiditra am-ponja omaly tamin’ny 4 ora sy 15 mn tolakandro i Roméo araka ny fanapahan-kevitry ny mpitsara misahana ny ankizy tsy ampy taona, hany tokana nandray ny antontan-taratasy momba ny fanenjehana ity olona efa navotsotry ny fitsarana ka nosamborina fanindroany indray.
Raha iverenana ny raharaha, tsy nisy mpitsara nandray mihitsy ny antontan-taratasy momba ity raharaha ity fa narirarira hatrany ireo zandary nitondra ny voampanga teny amin’ny fitsarana. Omaly tamin’ny 8 ora sy 30 mn maraina, tonga teo anoloan’ny fampanoavana ny zandary nitondra ny antontan-taratasy momba ny raharaha tora-baton’ny RN 2 ao Brickaville. Tamin’ny 11 ora sy 08 mn nivoaka ny birao ny tonia mpampanoa lalàna eo anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany. Tamin’ny 11 ora sy 35 mn indray nisy teny midina fa entina any amin’ny mpitsara misahana ny ankizy tsy ampy taona. Tonga tao ny zandary sy ny voampanga, saingy nandà avy hatrany tsy handray ny antontan-taratasy momba ny raharaha Brickaville ny eo anivon’ny fitsarana ka nivoaka ny birao ilay mpitsara. Niandry teo amin’ny fitsarana ambony ny fianakavian’ny mpanara-dia ny voampanga sy ny zandary nitondra azy.
Hanao sakana ao Brickaville ny fianakavian’i Roméo…
Tamin’ny 4 ora niditra ny birao indray ramatoa mpitsara ary tamin’ny 4 ora sy 15 mn dia noraisiny ihany. Nilatsaka ny didy fa aiditra am-ponja vonjimaika i Roméo. Nilaza ny eo anivon’ny fitsarana momba ity antontan-taratasy ity fa “noho ny sitraponareo zandary dia naiditra am-ponja vonjimaika izy na tsy tokony ho izay aza”.
Tsy niandry ela ny fianakavian’i Roméo tonga nanaraka ny raharaha tao Toamasina fa nilaza tamin’ny mpanao gazety fa horaiketina manomboka androany hariva (omaly io) ihany koa ny sakana ho fitakiana ny famotsorana an’i Roméo fantatra amin’ny anaram-bosotra hoe Dada, mpivaro-kena. “Aleo samy hitokona ka hapetrakay ihany koa ny sakana eo Brickaville tsy hahafahan’ny fiarakodia rehetra hifamezivezy”, hoy ny solontenan’ny fianakaviany sy ireo mpomba azy.